Dhibaatada wax badan ayaa laga bartaa in Madasha Qaran ay Hal Xisbi iyo Hal Murashax Yeelato 2020/21? – Damqo
Dhibaatada wax badan ayaa laga bartaa in Madasha Qaran ay Hal Xisbi iyo Hal Murashax Yeelato 2020/21?
Shir ay isugu yimaaddeen Madasha Xisbiyada Qaran (MXQ) mudadii u dhaxeysey 29ka Febraayo illaa 4- ta Maarso 2020, oo ay kasoo qaybgaleen dhammaan xisbiyada xubnaha ka ah MXQ. Muddadii 5-ta casho ahayd ee shirku uu socday, waxaa ahmiyadda ugu weyn la siiyay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee dalka ka jira oo maraya heerkii ugu adkaa taasoo horseedi karta in dawladnimadii la kobcinaayay ay wiiqanto haddii aan la helin xal degdeg ah oo ku aadan marxaladdaan.
Wadatashi iyo gorfeyn dheer kadib, waxay Madashu isku raacday qodobadaan: 1- Madashu iyadoo ka ambaqaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimadu, xisbiyada ay ka koobantahay madashu waxay isku raaceen in ay ku midoobaan Hal xisbi siyaasadeed.
2- Si loo gaaro midnimada kor ku xusan iyo farsamo ahaan qaabka uu noqonayo xisbiga cusub, waxaa la magacaabay guddi farsamo oo muddo 45 casho guduhood kusoo dhameystira howlaha farsamo ee la xariira arintaas.
3- Iyadoo laga ambaqaadayo Dastuurka KMG ah ee dalka iyo Sharciga Doorashooyinka, waa in ay doorashadu ku dhacdo waqtiga loo asteeyey laguna galo hanaanka Axsaabta badan.
4- Si waafaqsan Dastuurka KMG ah ee JFS, Madashu waxay ku baaqaysaa in wada hadal shuruud la’aan ah ay isugu yimaadaan saamileyda siyaasadeed ee dalka: Dawladda Federaalka, Dawladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka iyo Xisbiyada Siyaasadeed, si ay isfaham uga gaaraan arimaha masiiriga ah ee la xiriira hirgelinta doorashada 20/21.
5- Madashu waxay bogaadinaysaa kaalinta fiican ee ururada Dowliga ah iyo dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya sida: Qaramada Midoobay (UN), Midowga Afrika (AU), Midowga Yusub (EU), Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC), USA, UK iy IGAD, gacanta ay ka geystaan had iyo goor dib u dhiska iyo dib u yagleelida Soomaaliya.
6- Madashu waxa ay soo dhaweynaysaa go’aankii Golaha Ammaanka iyo saxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ay soo saareen 28/25 Feberaayo 2020 ee ku aadanaa in doorashadu ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay.
7- Madashu waxa ay soo dhaweynaysaa uguna baaqaysaa xisbiyada Siyaasadeed ee ka jira dalka inay la bahoobaan isbahaysiga cusub si loo xaqiijiyo himilooyinka umadda Soomaaliyeed.
8- Madashu waxa ay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay kaalinta uga aadan ka qaataan in doorashadu ku qabsoonto xilliga dastuuriga ah ee loo asteeyay si xasilooni ku dheehantahay. [05/03, 10:40 a.m.] Hi:
9- Madashu waxa ay aad uga xuntahay in hogaanka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya uu u weeciyay ciidankii, hubkii iyo dhaqaalihii loogu talagalay la dagaalanka argagixisada daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta dawlad goboleedyada.
Waxaana cadeynaynaa in masuuliyadda dhibaatadaa ka dhalata ay qaadi doonaan hogaanka dawladda Federaalka.
10- Madashu waxa ay ugu baaqaysaa ciidamada qalabka Sida ee Soomaaliya in ay waajibaadkooda u gutaan si dastuuri ah oo siyaasad ka madax banaan, ayadoo looga digayo in ay qaataan isla markaana fuliyaan amaro khilaafsan dastuurka dalka iyo shuruucda ciidamada qalabka sida.
11- Madashu waxa ay tacsi u diraysaa dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintey dagaaladii ka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyo Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Sidoo kale waxay u rajeyneysaa intii ku dhaawacantay inuu illaahay siiyo caafimaad degdeg ah.
12- Madashu waxay aad uga xuntahay kana tacsiyeynaysaa dayicii ku dhacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugnaa shabeelooyinka kuwaas oo argagixisada arxanka daran ay ku gumaadday fariisimadoodii.
13- Madashu waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan madal dib u heshiisiin qaran oo ay uga tashanayaan aayahooda iyo badbaadinta geeddi socodka dhismaha Dowladnimadooda. Ugu danbayn madashu waxa ay umadda Soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ay ilaaliyaan midnimadooda iyo gobannimadooda, ayna xoojiyaan nidaamka dawladnimo si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Mahadsanidin Danjire: Cabdirisaaq Axmed Shoole Afhayeenka kmg ah ee Madasha
Previous Farmaajo oo rabo in abtirsiina ummadda Soomaalyeed in oo ka dhigo Itobiyaan.
Next Askarigan lagu dilay Degmada Dharkiinley ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay oo Haramcad ka tirsan oo dil loogu gesto Dagmada DHARKEENLEEY